I-Whitefish Condo ihlezi ezihlahleni kuBig Mt - I-Airbnb
I-Whitefish Condo ihlezi ezihlahleni kuBig Mt
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Markus
U-Markus Ungumbungazi ovelele
Okusanda kulungiswa, i-700 sf Condo/loft yethu inendlovukazi engu-1, eyodwa endaweni ephakemeyo, kanye nosofa olingana nenkosi phansi. Ilungele umndeni wethu wabangu-4 futhi iyindawo esithanda kakhulu ukuchitha isikhathi kuyo.
I-Ptarmigan Village inezindawo ezinhle ezigqanyiswe yichibi lamanzi anosawoti angaphakathi endlini kanye nobhavu omkhulu oshisayo ongaphandle. Zombili ziphelele ngemva kosuku olusebenzayo lwe-MT. Kuyimizuzu emi-5 ukuya kumakheshi kanye nemizuzu eyi-10 ukuya edolobheni.
I-Whitefish iyindawo ekhetheke ngempela engithemba ukuthi wena nomndeni wakho nizoyithokozela njengoba senza.
I-Condo yavuselelwa ngokuphelele ngo-2015 yengeza igumbi lokuwasha eligcwele elinewasha/isomisi, isikhipha umswakama okomisa lawo mabhuzu e-ski amanzi namajazi noma izingubo zokubhukuda, ikhishi elivulwe yi-gourmet, kanye nezimpawu zokhuni ezi-rustic nokukhanyisa kulo lonke.
Ephaseji lokungena kunendlu yokugezela eyodwa eneshawa kanye nendlu yangasese ehlukene nendawo enkulu yokucwila. Njengoba uqhubeka ungena endaweni yokuhlala enkulu, kunesitebhisi esivulekile (esinokugcina izikhwama ngaphansi) kwesokudla esinesitebhisi esihle sokhuni semvelo esiholela phezulu.
Indawo yokuhlala enkulu inefasitela elikhulu eliphindwe kabili elibheke ehlathini, ibhokisi lomlilo elinezilayidi ezizungezile ukushisa lobo busuku obushisayo baseMontana (izinkuni zihlinzekwa mahhala endaweni ehlala izinkuni), itafula lokudlela labantu abangu-3 eliguqulela ukuze i-6, i-recliner ethokomele, kanye nosofa omkhulu odonsela embhedeni olingana nenkosi.
Indawo enkulu ivula ekhishini enophahla oluphezulu kanye neyunithi yokugcina i-Buckeye yakudala. Ikhishi lenziwe kabusha laba namathayela wesitimela esikeka ngesandla, i-ovini yokuqondisa, kanye nezinto zikagesi ezingaphezulu kolayini.
Umpheme omkhulu ongemuva ufinyelelwa ngomnyango we-patio oshelelayo ngemuva kwendawo enkulu. Isitezi siyi-oasis yangasese enamalambu ephathi, i-grill, nesango elikuvumela ukuthi uhambe uphumele ehlathini lomsedari. Kukhona igquma elikhulu ongalethwa phansi kwesokunxele kanye nezihlahla eziningi zokujikijela i-hammock ehlobo. Ingenye yezindawo ezithandwa izingane zethu emhlabeni.
Isitezi esiphezulu sinezingubo ezi-3 zokugcina izingubo, indlovukazi, nombhede owodwa. Kunefasitela elikhulu elinesivalo elingavulwa ngesikhathi sasebusika uma kudingeka. Ehlobo kufakwa iyunithi yefasitela le-air conditioning lapho.
I-HDTV engu-36" ene- I-Roku, I-Netflix
I-Whitefish empeleni ingenye yezindawo ezinhle kakhulu emhlabeni. Ngingaqhubeka ngiqhubeke ngakho, kodwa uma ubheka lokhu cishe usuyakwazi lokho. Kwanele ukusho ukuthi sesihlale emhlabeni wonke, futhi yilapho sizokhetha ukutshala ifulegi uma sesiqedile ukuhamba.
Enye yezinto ezinhle kakhulu ngePtarmigan Village izinsiza ezinhle.
Okugqamile kulokhu yindlu entsha yokubhukuda. Inechibi elikhulu lamanzi anosawoti angaphakathi endlini, i-sauna, ubhavu omkhulu oshisayo ongaphandle, indawo yokudlela enkulu ene-grill yomphakathi, izinkantolo zethenisi eziphindwe kabili, kanye nenkundla yokudlala yangaphandle. Kukhona nechibi langaphandle, ichibi lokudoba, nezinkundla ze-basketball kwezinye izindawo ezizungeze intuthuko.
Enye yezinto esizithandayo esigodini sase-Ptarmigan indawo eyimfihlo engasechibini enedokodo elintantayo izivakashi ezingafinyelela kulo. kuyimizuzu eyi-10 ukusuka e-condo futhi yinhle ngokuphelele.
Sihlala eJalimane manje futhi ngeke sibe khona mathupha, kodwa ngihlala ngitholakala ngemibuzo. Kunehhovisi elingaphambili lokungena kanye nenombolo yamahora angu-24 yehhovisi uma kunesimo esiphuthumayo.
UMarkus Ungumbungazi ovelele